Julian Richings momba ny 'Anything for Jackson' sy ny fahalemen'ny fihetsika
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Resadresaka: Julian Richings amin'ny 'Spare Parts', 'Anything for Jackson', ary ny fahalemen'ny fihetsika
Vaovao Mahafaly Fialam-bolySarimihetsika mahatsiravinaResadresaka (sarimihetsika)
by Kelly McNeely Jona 7, 2021
Mety tsy fantatrao ny anarany, fa ho fantatrao tsara ny tarehiny. Julian Richings dia foto-tsarobidin'ny sarimihetsika sy fahita fahitalavitra, miaraka amina anjara asa Supernatural, Cube, The Witch, Urban Legend, Lehilahy vy, Andriamanitra Amerikanina, Channel Zero, Hannibal, Diso fihodinana, ary maro hafa. Ilay mpilalao anglisy (mipetraka sy miasa ankehitriny any Canada) ankehitriny dia manana fahatsapana ara-batana matanjaka izay entiny amin'ny anjara asa rehetra, manome endrika feno ny ampahany tsirairay ary manome azy ireo ny gravitas manokana. Mpilalao sarimihetsika mahavariana izy izay miavaka amin'ny sehatra tsirairay, na inona na inona haben'ny ampahany.
Vao haingana aho no niara-nipetraka tamin'i Richings hiresaka aminy momba ny fiofanany ho mpilalao sarimihetsika, ary ny anjara andraikiny tamin'ny famoahana exorcism. Na inona na inona ho an'i Jackson ary ny firoboroboan'ny gladiatera punk rock Piesy detase.
Na inona na inona ho an'i Jackson
Kelly McNeely: Manana asa be dia be ianao amin'ny sarimihetsika sy fahitalavitra karazana eto Canada. Ahoana no nanombohanao? Ary manintona anao manokana hiasa amin'ny karazany ve ianao?
Julian Richings: Ahoana no nanombohako… Toa mpilalao sarimihetsika foana aho. Mpiray tam-po amiko aho, ary manan-drahalahy roa aho - ny iray na ny lafiny iray amiko - ary nahatsapa ho zazakely aho, izaho no maniry… Hiavaka amin'ny isan'ny rahalahy tsirairay aho, tsy hitovy amin'ny rehetra.
Nanana zokiko lahy koa aho izay manana fahaizana manokana amin'ny famoronana tontolo iainana, lasa mpamorona teatra izy ary teo am-pananganana tontolo iainana tao an-tokotaninay. Ary mila olona hipetraka eo amin'ireny tontolo iainana ireny izy, toy ny mpitantana ny fivelomany, ary matoatoa ho an'ny tranony sy ny entany, koa… vinavina iza no nanao izany. Ary noho izany dia nanao zavatra foana aho, nahatsapa ho nahazo aina foana.
Ary amin'ny lafiny sasany, ny fihetsika dia mamela ahy ho karazana endri-tsoratra tafahoatra izay tsy ho nisy mihitsy tamin'ny tena fiainana. Toy ny hoe, fantatro foana fa tena olon-tsotra sy maloka aho. Fantatrao fa mandeha ny olona, ​​Andriamanitro ô, milalao an'io lehilahy io ianao! Fahafatesana io mihoatra ny natoraly! Ary tiako ny milaza, Eny, navela ho toy izany aho, saingy tsy tena te hahafantatra ahy ivelan'ny sarimihetsika ianao. Ka, oh, ary misy lafiny roa amin'ny fanontanianao! Genre.
Kelly McNeely: Manintona anao manokana ve ny karazana?
Julian Richings: Heveriko fa voajanahary izany. Heveriko fa, fantatrao, fa nivoatra fotsiny izy io nandritra ny taona maro, ireo karazana ampahany nilalaovako. Tsy dia amin'ny filalaovana tantara an-tsehatra loatra, nihalehibe tao amin'ny teatra aho, niofana tamin'ny teatra, nilalao tantara an-tsehatra aho, ary avy eo niova tsimoramora ho film sy fahitalavitra. Ary teo am-panaovana teatra aho dia nanomboka nanao dokambarotra hanampiana ny karamako. Ary ny dokambarotra rehetra dia mazàna ho endri-pitokisana, geeky, hafahafa. Satria, fantatrao, rehefa manao varotra ianao, tsy izaho no dadako mahazatra, na, fantatrao, ilay lehilahy tsara tarehy nify lavorary. Izaho ilay bandy hafahafa foana, ilay eccentric. Ary izany dia karazana tsy azo ihodivirana amin'ny sarimihetsika sy fahitalavitra, satria mpanelanelana ara-bakiteny kokoa io. Ka ny karazana andraikitra nataoko dia ny taloha sy ny vahiny ary ny endrika mampihoron-koditra. Ka karazana organika io.
Ao amin'ny teatra dia nanana karazana spektrum maro kokoa aho, saingy raisiko avokoa ny zava-drehetra. Ary manandrana mampiditra singa samihafa amin'ny tarehin-tsoratra rehetra lalaoviko foana aho, ka tsy atsipiko ho toy ny oh, andraikitra mampihoron-koditra izany. Toy ny hoe anjara asa mampihoron-koditra izany dia hanandrana hampiditra olom-bitsy aho na raha manao Emperora ratsy fanahy aho dia hanandrana hampiditra fahalemena kely, fantatrao ny tiako holazaina? Ka, ho ahy, dia toy ny, tsy haiko, tsy azo ihodivirana fotsiny, hoy aho.
Kelly McNeely: Ary ankehitriny miresaka momba ireo olona ratsy toetra dia nilalao olon-dratsy ianao Piesy detase ary vao haingana tao Fialam-boly ratsy, ary toetra sarotra kokoa amin'ny fitondran-tena ao Na inona na inona ho an'i Jackson… Karazan'andraikitra manao ahoana no tena mahaliana anao amin'ny maha mpilalao sarimihetsika anao?
Julian Richings: Tsy dia be loatra ny anjara andraikitra tsy alehako, oooh, mahaliana izany. Tsy mahatsapa habe aho. Tsy fantatro na fitsarana an-tendrony, hoy aho, tsy ampahany lehibe loatra izany ho ahy. Oh, kely loatra izany, na cliche loatra. Tiako ny tantara. Tiako ny mitantara tantara. Ary tiako ho anisan'ny tantara. Ary indraindray izany dia mitaky zavatra kely sy mahery. Ary indraindray dia zavatra miparitaka amin'ny arc lehibe kokoa izany.
Sarotra amiko ny manavaka azy. Toy ny, fantatrao, fa misy saron-tava kilasika izay maneho ny teatra. Ao ny saron-tava mitsiky ho an'ny hatsikana, ary ao ny saron-tava mamirapiratra noho ny voina. Tena sarotra amiko ny mampisaraka azy roa, heveriko fa ao ambadiky ny zava-doza rehetra, misy ny hatsikana ary ny mifamadika amin'izany. Ary mitovy amin'ny anjara asako. Ka tiako ny mampifangaro azy io, tena mahazo aina aho amin'ny ampahany kely amin'ny tantara, ary faly aho mitondra tantara lehibe. Ka tsy aleoko mandeha, tsara, horonantsary manaraka, te-ho izy aho na izao.
Heveriko fa rehefa mihalehibe aho, faly aho manoritsoritra ny fiheveran'ny rehetra ny zavatra ataon'ny mpilalao taloha. Ka rehefa mihalehibe aho dia faly manao izany milalao olo-mahery mahery vaika, satria amin'ny kolontsainay, dia manilika ny fahanterana ho zavatra iray izahay, fantatrao fa voasoratra ianao. Ka izany dia karazana zavatra mangatsiaka izay efa manomboka ekeko.
Kelly McNeely: Ie, hitanao fa be izany Na inona na inona ho an'i Jackson. Tiako io hevitra io fa tsy, fantatrareo, ireto ankizy mamaky ity boky ity sy miantso demonia, dia ity mpivady zokiny ity, ary tokony hahalala bebe kokoa izy ireo, fa na izany aza dia ataony ihany. Ary tena tiako izany.
Nanontany tena aho raha afaka miresaka kely momba ny fahasarotana ara-pitondran-tena ianao Na inona na inona ho an'i Jackson, satria tena fomba fanao amin'ny fakana an-keriny io. Misy an'ity hevitra iray manontolo ity fa ataony ho an'ny vadiny izany, ataony ho an'ny fianakaviany izy, fantany fa mety tsy voatery ho ny zavatra mety hatao izany. Fa fihetsika fitiavana daholo izany.
Julian Richings: Marina tokoa, nokapohinao teo no ho eo izy. Heveriko fa ny tena mahafinaritra sy mampitebiteby momba ilay sarimihetsika dia ny hoe olona roa no mifikitra amin'ny tsirairay, fa mizara alahelo mahatsiravina sy loza mahatsiravina. Ary mba hanamorana ny fanamaivanana izany alahelo izany, dia mifankatia izy ireo, ary ny fihetsika izay noraisin'izy ireo dia tena tsy azo avela intsony, saingy amin'ny anaran'ny fitiavana no anaovany izany ary miaro ilay olona hafa. Ary amin'ny lafiny maro, izy ireo dia nanodina ny andraikitra lavitra ny tenany. Ary heveriko fa tena toerana saro-pantarina sy mahaliana ny hipetrahan'ny film izany.
Amin'izao fotoana izao, amin'ny maha mpilalao sarimihetsika anay, izaho sy Sheila dia tena miara-miasa tsara, toy ny fananana simia tena tsara, ary nilalao ny fahamendrehan'ny olona roa fotsiny izahay. Ary izahay, araka ny eritreritro, no nitondrantsika azy ny zavatra niainantsika manokana. Samy sambatra izahay fa nanana fifandraisana lavitra. Ary noho izany dia nanandrana nanao ny marina momba ny jury sy ny fanelingelenana ny fananana fifandraisana maharitra izahay, fantatrao, ary ity karazana komity komity ity izay mety hiditra ao koa.
Kelly McNeely: Marina tokoa. Ary misy, mazava ho azy, ny fakana an-keriny tao Piesy detase ary koa, izay manana karazan-dahatsoratra sarotra sy antony manosika ratsy kokoa.
Julian Richings: Ie, tiako holazaina, mazava ho azy fa karazana horonantsary mialoha, maba, ary tsy misy gadra. Ny zavatra tiako momba azy, izay tena ampidiriny ao dia karazan'olona ratsy. Misy karazana hamafiny avo lenta, ary misy ny fahatsapana fa ny vehivavy dia tsy faly fotsiny hoe, fantatrao, zavatra namboarina. Fantatrao fa tsy maintsy niady tamin'ny lalan-kalehany izy ireo nankany amin'ny fahalalahana. Ary io dia karazana angovo azo avy aminy, ary karazan-kerisetra amin'ny vatolampy sy fihodinana. Ary mahafinaritra izany. Hafa mihitsy. Karazana angovo tena hafa mihitsy.
Kelly McNeely: Vibe tena hafa tokoa eo amin'ireo film roa ireo. Ankehitriny, faly aho mandre anao miresaka betsaka momba ny teatra. Azonao atao ve ny miresaka kely momba ny fampiofanana anao sy ny mombamomba anao amin'ny teatra ary raha toa ka mety hampiasa karazana izany, toy ny tena fahasarotana hitanao amin'ireo tarehin-tsoratra ireo?
Julian Richings: Ie, izany tokoa. Fitaovana lehibe teo amin'ny asako io. Ka nihalehibe sy niofana tany Angletera aho. Saingy nihalehibe aho tao anatin'ny fotoana iray izay niharatsy ny rafitra anglisy taloha, ireo orinasan-tsehatra repertory isan-kerinandro ary ireo teatra isam-paritra ary tsy misy ifandraisany intsony izahay. Ary noho izany dia nisy karazana onja teatra fiarahamonina vaovao izay hanaovan'ny olona seho amin'ny sehatra tsy nentim-paharazana. Nanao fampisehoana tao amin'ny valan-javaboary aho, teo amin'ny faran'ny seranan-tsambo, teny amoron-dranomasina, tao an-tranon'ireo be antitra - ny hevitra hitondrana teatra ho an'ny vahoaka.
Ary noho izany dia nisy ny fahatsapana - tamin'ny taona 70, tany Angletera - fa ny rafitra taloha dia tsy misy ifandraisany intsony, niaraka tamin'ny fahitalavitra sy sarimihetsika, fa tsy maintsy ovaina ny teatra nentim-paharazana. Ka teo no nidirako an-tsehatra, teo ny taona niainako voalohany, ary nampiofana ho mpilalao sarimihetsika ihany koa aho, tsy toy ny sekoly fampianarana anglisy maro, izay tena nahay tamin'ny sekoly taloha.
Tena nampiofanina tamin'ny fomban'ny Grotowski aho. Izy no mpampianatra poloney tamin'io fotoana io, izay niresaka momba ny famoronana teatra fizika fanaintainana sy habibiana izay saika nampiofanina toy ny mpandihy ireo mpilalao, nanana karazana ara-batana momba azy ireo izy ireo. Ary raha ny marina, izany no antony niafarako tany Canada, dia ilay fampisehoana izay niarahako tamina karazana fampisehoana maro fiteny, kolontsaina maro izay nandeha tany Eropa, nitety an'i Eropa, nankany Polonina, tonga tany Canada, izany dia seho fitsangatsanganana. Ka dia hitako i Toronto sy - tantara lava - fa niafara tany Toronto aho. Fa ny hevitra hoe ny vatako ho an'ny fampisehoana dia teo foana. Ary namboariko tamin'ny teatra ho amin'ny sarimihetsika sy fahitalavitra.
Fa manana toetra ara-batana foana amin'ny toetrako aho. Midika izany fa tsy fanahy iniana io, fa eo izy, satria voajanahary amin'ny fampiofanako azy. Ka na ny tarehiko aza, na ny masoko, na izany, fantatrao fa milalao zavaboary toa ny Three Finger in aho Fihodinana diso, na Fahafatesana ao mihoatra ny natoraly. Ny zava-dehibe amiko dia ny vatana ara-batana. Ary tsy izany no tiako holazaina, fantatrao, toa ny fiezahana ho lehibe sy matanjaka ary henjana fotsiny. Tsy toy izany. Tsia, misy karazana halaliny izay avy amin'ny vatana.
Kelly McNeely: Somary kely fotsiny amin'ny fahadiovana ara-batana.
Julian Richings: Ie. Ary ny zavatra toa ny teatra nentim-paharazana, raha ny tena izy dia tsy karazana izay haiko tsara, fantatrao, ny teny anglisy teny anglisy mahazatra. Tsy zavatra fantatrao izany, izay misy olona mijoro manodidina sy misotro dite ary mifanakalo hevitra sy miady hevitra. Tsy dia mahay tsara an'io karazana teatra io aho. Mampihoron-koditra tokoa, ary karazana sarimihetsika miasa toa azy Piesy detase, mifanentana amiko tsara.
Kelly McNeely: Ka io dia mety ho karazana fanontaniana mivelatra. Fa aminao inona no fifaliana sy / na fanamby lehibe amin'ny fihetsika?
Julian Richings: Oadray. Ampahany amiko io, hainao? Izany foana no izy. Samy mieritreritra aho fa ny faharefoana. Satria tsy maintsy eo foana ianao amin'izao fotoana izao, sa tsy izany? Tena mahaliana tokoa amin'ny fitantarana ny tantara, tokony hirotsaka an-tsehatra ianao fa tsy mety tafiditra ao amin'ny ati-dohanao izany, hey, tena faly aho manaparitaka ny entako. Sa, voafehiko, sa iza aho? Mampihomehy, io feo ao an-dohanao io dia tsy afaka ho eo, tsy maintsy ao anatiny ianao. Ka raha te-ho toy izany dia mila manana toerana marefo ianao, araka ny eritreritro, ary misy amin'izao fotoana izao.
Ary tena sarotra be izany. Tena sarotra be ny tsotra sy misokatra ary mandeha ho azy. Ary noho izany, ny fikatsahana an'izany dia mitaky fikirizana. Ary mitaky androm-piainana tsy tokony ho afa-po mihitsy io, raha ny tena izy. Ankehitriny, tsy tezitra amin'izany aho. Heveriko fa izany no fomba fiainako. Mila miaina ny fiainako aho amin'ny tongotro eo alohako. Somary mihetsika foana aho, ataoko adaladala ny olona satria tsy afaka mangina aho, mihaino foana aho, mamaly.
Saingy samy fifaliako lehibe indrindra ny fahatsapako ampahany lehibe amin'ny fivelaran'ny fiainana. Saingy somary mavesatra ihany koa, satria tsy misy fandriampahalemana. Amin'ny maha-mpilalao sarimihetsika ahy, tsy afaka ny hipetraka kely amin'ny valiny aho. Tsy afaka aho. Na dia nandritra ny COVID aza aho dia mbola tsy afaka nipetraka sy nanoratra ny tantarako na nanoratra ny fisaintsainako, na be loatra amin'ny tongotro eo alohako mihaino olona hafa ary taratry ny zavatra omeny ahy. Manantena aho fa hamaly izany. Toa somary mody miseho ihany io, saingy toe-tsaina io. Heveriko fa ny toetran'ny olona izay heveriko fa mila manandrana sy mitahiry ianao.
Iantrao Parts Azo alaina ao amin'ny VOD, Digital, DVD, ary Blu-ray izao
Na inona na inona ho an'i Jackson ho hita ao amin'ny VOD, Digital, DVD, ary Blu-ray amin'ny 15 Jona
Na inona na inona ho an'i JacksonJulian RichingsPiesy detase
Mpandray anjara 'Stranger Things' Manatevin-daharana ny 'Maty Amin'ny Alavan'ny Andro' ao anaty tranofiara